Manodidina ny 36 taona eo ho eo izy io tratra tamin’ny 11 ora sy sasany alina, nandritra ny fisafoana tampoka nataon’ny polisy. Raha araka ny fantatra dia niafina tsy lavitr’ilay andrin-jiro saika nangalarany ity lehilahy iray ity. Tsikaritr’ireo polisy anefa izany ka nanatona avy hatrany izy ireo mba hanadihady mikasika azy. Raha nahita ireto polisy nanatona azy anefa ity lehilahy ity dia nikasa handositra saingy voasambotra avy hatrany. Rehefa nosavaina ny teny aminy dia nahitana fitaovana maromaro toy ny baramina sy “tourne-vice”. Tsy nahitana kara-panondro kosa anefa tany aminy. Nentina avy hatrany teo anivon’ny kaomisarian’ny Boriborintany fahenina ity lehilahy ity mba hanaovana fanadihadiana.